Fiangonana miatrika ny fahaleovan-tena - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Améliorer la qualité des agents recrutés par l’Administration publique il y a 2 jours
La famine dans le Sud n’est pas une fatalité mais il faut aussi parer aux urgences il y a 10 jours
Il y a plus urgent il y a 17 jours
Le député Raholdine crée une vaguelette dans un verre d’eau trouble il y a 17 jours
Manorata tantara tsy mba miangatra ! il y a 17 jours
Le cours de l’Ariary reflète-t-il la réalité économique ? il y a 17 jours
Fiangonana miatrika ny fahaleovan-tena
Niainga tamin’ny fandinihana ny tantara nataon’i Pierre Lupo, momba ny hoe « Eglise et décolonisation à Madagasikara » ity fandinihana ity. Nanana ny toerany ny Fiangonana katolika tamin’izay zavatra niainan’ny firenena. Ka rehefa mankalaza ny faha 60 taona nahazoany fahaleovantena ny firenena, tokony hanontany tena ny Fiangonana hoe « aiza ho aiza izy ? » satria tsy azo sarahana amin’ny tantaram-pirenena ny zava-misy iainany na ny asa sahaniny na ny teny izay toriany. Azo lazaina aza fa nifanindran-dalana tamin’ny toe-draharaham-pirenena ny fiovana samihafa tao anatin’ny fiangonana.
Jery todiky ny tantara
Ny vanim-potoana lavabe teo amin’ny fiainan’ny firenena (1896-1960), izany hoe 64 taona niainana ny fanjanahana dia tsy azo lazaina hoe « fotoana nanjavozavo na teteza-mita » fotsiny ihany. Fiovana lalina no niainan’ny firenena. Azo ambara tsy am-pihambahambana aza fa io no tena namaritra ny ankehitriny rehetra satria ireo fanovana ara-kolontsaina, toy ny fampianarana an-tsekoly, ny lova politika na rafitra izany na fisainana, ny antoko sy ny olany ary ny repoblika sy ny fitantanany dia nampifamatotra ny firenena amin’ny tantaran’i Eoropa moderina sy mpanjanaka.
Ny olan’ny protestanta sy katolika dia lovam-pifandraisan’ny Anglisy sy Frantsay . Ny ifanoheran’ny kolontsaina vahiny sy malagasy dia endriky ny sesitany niainan’ny mpanjaka Ranavalona III, ka mahatonga ny anindrana ho zary fisainana malagasy, izany hoe, antsisiny na anjorom-bala. Ny fanovam-pitantanana nampindrana ny fahefana eo an-tanan’ny eveka malagasy nanomboka ny taona 1939 dia nanokatra varavarana ho amin’ny tolon’ny 1947 na tsy mivantana aza. Nanamafy izany ny fanambaran’ny eveka tamin’ny 1953, fa « ara-drariny ny fanirian’ny Malagasy ny fahaleovantenany ».
Na izany aza, mbola sahirana koa ny Fiangonana mamaritra izay tena maha izy azy eo anatrehan’ny fiovana samihafa. Ny Konsily Vatikana faharoa dia nitondra rivo-baovao amin’ny fiainan’ny Fiangonana, fa hatreto aloha tsy afaka milaza ny Fiangonana fa voafaritra mazava ny hoe « Fiangonana manoloana ny andro ankehitriny ». Asa pastoraly toy inona no voafaritry ny Fiangonana araka ny foto-pampianaran’ny Konsily mba tsy ho sempotry ny rivotra mitsoka ato anatiny fotsiny ny Fiangonana ? Raha tsy izany dia miara-sempotra eny antenantenam-piakarana amin’ny Firenena sy ny politikany eny ny Fiangonana.
Ny Fiangonana sy ny hetahetam-pahaleovantena
Ny famonjem-panahy no tena asa sahanin’ny Fiangonana. Saingy noho izy « experte en humanité », natao hitsinjo kokoa ny olombelona dia mpitondra fanantenana izy. Mpampianatra ny Fiangonana, mpamonjy ny Fiangonana, mpizara fahasoavana ny Fiangonana. Saingy tsy azo odian-tsy hita fa nifanindran-dalana tamin’ny fiorenam-pakan’ny fanjanahana teo amin’ny firenena ny asan’ny Fiangonana. Azo lazaina aza fa nahatratra ny atifon’ny Malagasy ny asan’ny Fiangonana ka nampiorim-paka ny fiovana lalina teo amin’ny Tanindrazana sy ny Firenena : ara-kolontsaina, ara-drafitra, ara-politika sy fitantanana…
Nifanjohy araka izany ny fanoherana ny politikam-panjanahana sy ny figohana ny tantelin-jaza vaovao samihafa entin’ny sivilizasiona eoropeana. Anisan’ny nanampy tao amin’ny fivondronamben’ny eveka i Mgr Rolland, evekan’Antsirabe amin’ny fanampiana ny kristianina sy ny Fiangonana amin’ny fiatrehana ny fiainam-pinoana. Hoy izy amin’ny taratasiny hafatry ny Noely ny taona 1956 : « tsy mandeha ila anefa ny fandrosoan’ny Eglizy eto Madagasikara sy ireo faritany ao Afrika. Hatraiza hatraiza dia hita fa mifohafoha sy mahatsiaro tena ny firenena maro miandrandra fivoarana eo amin’ny fitondram-panjakana. Araka ny hevitray dia tsy maintsy ho tanteraka izany fivoarana izany na manao ahoana na manao ahoana »… « rariny sy hitsiny raha tia tanindrazana ianareo, raha mitady izay hahazoana fahaleovantena ; adidinareo aza izany sady zavatra voasokitra lalina ao am-pon’ny olona tsirairay avy, ka tsy misy afaka mandidy anareo amin’izany ». (Eglise et décolonisation à Madagascar, P.71-72).
Hevi-dehibe telo no asongadina : ampifandraisin’ity eveka ity sahady ny « fandrosoana (développement), ny fivoarana (progrès) ary ny fahaleovantena (indépendance) ».
Mahay mijery ny fotoana soa !
Fomba iray hijoroany amin’ny maha mpaminany ny Fiangonana ny fahaizany mijery ny fotoana soa, hilazany fa « indro ankehitriny ny fotoana tsara, indro ny androm-pamonjena » na lazaintsika hoe « signe des temps ». Toy izao no filazan’ireo ray aman-dreny teo amin’ny Fiangonana. Hoy Mgr Rolland tamin’ny taratasiny voalaza etsy ambony: « ny firenena Malagasy izao dia toy ny tovolahy mirijarija mahazaka tena ka omen-dray aman-dreniny ny anjara lovany iadidiany, mandidy manapaka izy : tany lonaka be midadasika an-tsaha, ny fiasana miavosa, ny biby fiompy mameno fahitra. Toa tapi-java-nirina, ary fiadanana no miandry aza raha mahay mampiasa ny sainy ary misikina herim-po. Tsy iza izany tovolahy izany fa ity firenena ity, mahatsiaro tena ankehitriny ka manomana ny hoavy. Mino marimarina izahay fa ho firenena hanjakan’ny rariny sy ny fiadanana izy, raha hendry sy tsy miamboho adidy. » (P.71).
Rehefa nahazo ny fahaleovantena ny firenena, dia nitodika be dia be tamin’ny olan’ny fampandrosoana ireo eveka. Namaky bantsilana ihany koa ireo vato misakana, ary manontany tena sady mampahatsiahy ny adidy miandry. Santionany vitsivitsy :
Ny volana marsa 1972, taratasin’ny Fivondronamben’ny eveka : « ny tena vatomisakana amin’ny fampandrosoana dia ny tontolo iainantsika anjakan’ny kolikoly. Maty eritreritra amin’ny fanatanterahana ny asa, hany ka manjaka ny tsy rariny sy ny tsy fahamarinana » (P.85)
Mgr Jean Guy Rakotondravahatra moa dia nitaraina fa tany lavitra andriana ny dioseziny. Manontany tena koa anefa satria « tsy ampy hamahana ny olan’ny tsy fandrosoana ny asa fitiava-namana mahazatra ny Fiangonana. Inona no tokony hataon’ny Fiangonana ? Tokony hihanona amin’ny fampahatsiahivana ny zavatra takian’ny Vaovao Mahafaly toy ny mahazatra ve ? Sa tokony handeha lavitra kokoa amin’ny fanaovana politika ? »
Raha tsorina, ny fandraisana andraikitry ny Fiangonana teo amin’ny firenena dia azo hitarafana ny fivoaran’ny tantaran’ny fahaleovantena tsy tanteraka araka ny nantenaina. Fotoana soa ho an’ny Fiangonana ve izao handinihany ny anjara toerany mazava eo amin’ny Firenena ?
Rocade Nord-Est : Le projet d’aménagement et de développement des abords en route - il y a 1 jour
Recrutement des fonctionnaires : Améliorer la qualité des agents recrutés par l’Administration publique - il y a 2 jours
HAFATRY NY FEM : “Ny Fanahy Fahamarinana no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra” (Jo 13, 20) - il y a 2 mois
Matoan-dresaka : Lohataona famaranana - il y a 11 mois